Yaab:Waligaa ma aragtey wariye Tv Live ah hurdo la dhacay xili war laga sugayey – SBC
Yaab:Waligaa ma aragtey wariye Tv Live ah hurdo la dhacay xili war laga sugayey
Wariye ka tirsan Telefishinka caanka ah ee Fox News ee laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa hurdo la dhacay xili uu toos ama Live ugu jirey warbixin ku aadan olalaha doorashooyinka wadanka Mareykanka lagu wado inay ka dhacaan bisha November ee sanadkan.
Wariyahan oo lagu magacaabo Doug Luzader ayaa toos hawada ugu jiray isagoo laga wareysan rabey magaalada Washington oo ku sugnaa Istuudiyaha, waxaase markii su’aasha la waydiiyey oo dadweynaha loo sheegay in warbixin lagu duwayo Studiyaha Fox News 7 ee magaalada Washington hal mar indhaha lala helay wariyihii warka laga sugayay oo hurdo la dhacay isla markaana aanayba ugu jirin xisaabta in warbixin laga sugayo uuna iska galay in uu yar qas ka siiyo bahal hurdo ah oo uu aad ugu xiiso qabay.
Wariyihii kale ee ku sugnaa Studiyaha Fox News 7 ee war akhriyaha ahaa ayaa wax jawaab ah ka helin Doug isagoo ku bilaabay hadalkiisa “Doug Luzader ayaa si toos ah ugu jira khadka isagoo ku sugan Washington, Hi Doug , kulan wanaagsan, subax wanaagsan bal arimahan wixii ugu dambeeyey inooga waran”.
Laakiin wariyihii wuxuu waayey cid u jawaabta iyadoo waliba Kaamirada uu ka muuqdo Doug Luzader oo hurdo ku jira oo aan wax war ah u hayn su’aal iyo jawaab waxa la waydiinayo, waxanaa markaasi ka dib laga wareejiyey Kaamiradii iyadoo dadka loo sheegay in dib loogu soo laaban doono warbixintaasi.
Arintan yaabka iyo qosolka xambaarsan ayaa waxay noqotey mid si weyn looga hadal hayo dalka Mareykanka, iyadoo wariyahan hurdada la dhacay Doug Luzader uu ka mid yahay wariyaasha rug cadaaga ah ee Telefishinka Fox News ee dalka Mareykanka.
Link-ga video hoose riix si aad u daawato Sheekadan qosol badan gaar ahaan xiligii hurdada uu la dhacay wariyaha iyo wariyihii kale oo indho taag taag uu ka soo harey.